सर्लक्कै सेतो भुत देख्ने आमा, के साचै भुत होला त ! हेर्नुहोस आमा के भन्नुहुन्छ ! – Samacharpati Samacharpati सर्लक्कै सेतो भुत देख्ने आमा, के साचै भुत होला त ! हेर्नुहोस आमा के भन्नुहुन्छ ! – Samacharpati
पाेखरा, ४ फागुन । भुत प्रेत जस्ता कुराहरुको बारेमा धेरै बहस हुने गर्दछ तर वास्तबमा भुत हुन्छ या हुदैन हाम्रो समाजमा पूर्ण रुपमा पुस्टि हुन नसके पनि यहि समाजमा बस्ने कोहि कोहि आफुले भुत देखेको दाबि पनि गर्छन । भुत किचकन्याको बारेमा हामीले धेरै चलचित्र पनि हेरिसकेका छौ।
यसै बीच हामी पोखरा महानगरपालिका वडा नं १३ डिहीको गाउ पुगेका थियौ। सुन्दर गाउ डुल्दै जादा हामीले अल्लि अगाडी टिकटकमा चर्चित हुनु भएकी आमालाइ देखौं । र थोरै कुराकानी गर्ने जमर्को गरौँ ।
उहा पनि भुतकै कुराकानीबाट चर्चित हुनु भएको थियो । जति हसिली देखिनुन्न्छ त्यतिनै पिडाका कुरा सुनाउन्नुछ । जतिलाइ आफ्ना कुराले दुखि बनाउन्नछ अन्त्यमा त्यतिनै खुल्ने गरि हसाउनुन्नछ । आउनुहोस थोरैबेर सिता बिक आमासंग गरेको कुराकानी हेरौ।
कुँडहर सहकारीको अध्यक्षमा विश्ववन्धु थापा
मादीबेसी जोड्ने मादीनदी माथि निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल